Haddii aad doonayso in aad ganacsade ahaan uga shaqayso Finland islamarkaasna aad tahay muwaadin u dhashay waddan aan ahayn Midowga Yurub ama Waqooyiga Yurub waxaad u baahan tahay sharciga deganaanshaha ee ganacsadaha. Haddii aad doonayso in aad Finland ka samaysato shirkad Start-up, waxaad u baahantahay sharciga deganaanshaha ee start-up. Sharciga degenaanshahana waa inaad soo codsataa kahor inta aadan imaan Finland.
Sharciga degenaanshaha ganacsadaha
Codsashada sharciga degenanaashaha
Ganacsade ahaan ku jooga Finland
Hawshaada ganacsi waa in ay noqotaa mid faa’iido leh, dakhliga ganacsigaada kaa soo gala waa in uu daboolaa noloshaada. Haddii ay shirkaddaadu tahay mid start-up ah oo aan weli lahayn dakhli sanadeed, waxaad dhaqaalaha nololmaalmeedkaada ku caddayn kartaa dakhliyo kale oo ku soo gala.
Sharciga deganaanshaha laguuguma siinayo sabab ah, in aad shirkad leedahay. Waa in aad adiga ka shaqaysaa shirkaddaada Finland, si aad u hesho sharciga degenaanshaha.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shirkad aasaasidda ka aqri bogga InfoFinalnd Shirkad ganacsi ku samaynta Finland .
ganacsade gaar ah, (shirkad magac ku ganacsi)
gancsadaha shirkad saamiley ah
Waa in aad shirkaddaada ka diiwaangelisaa rajistareeshinka ganacsiga ee Maamulka batantaha iyo rajistareeshinka (Patentti- ja rekisterihallitus) kahor inta aadan codsan sharicga deganaanshaha ganacsadaha. Haddii aad tahay ganacsade gaar ah, yacni aad leedahay magac ganacsi, waxaad sharciga degenanaasha dartiis u baahantahay Summadda Y (Y-tunnus). Haddii aad codsanayso sharciga degenaanshaha ee ugu horreeya welina aadan imaan Finland, uma baahnid Summadda Y.
Ka baaraandegista codsiga sharciga degenaanshuhu waa labo marxaladood. Marka koowaad Xarunta ELY (Xarunta deegaanka, gaadiidka iyo shaqooyinka) (ELY-keskus) ayaa qiimeyneysa faa’iidada shirkaddaada iyadoo qiimeynta ku saleynaysa qorshaha ganacsi iyo maalgelinta Markaas kaddib ayeey Hay’adda socdaalku go’aan ka gaareysaa sharciga degenaanshaha.
Bogagga Hay’adda socdaalka ayaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sharciga degenaanshaha ganacsadaha.
Sharciga degenaansha ganacsadahaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Haddii aad dooneyso in aad Finland ka aasaasto shirkad Startup ah, waxaad codsan kartaa sharciga degenaanshaha Startup ee loogu talagalay ganacsatada soo koreysa. Si aad u hesho sharciga degennaanshaha ee startup waa in aad heysataa qorshe ganacsi ee la taaban karo.
Shirkadaha Start-up waa shirkado yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah oo hiigsanaya horumarka caalami ah oo degdeg ah. Business Finland tayaa qiimaynaysa arrinta ah, in laguugu aqoonsan karo ganacsade start-up.
Codsashada sharciga degenaanshaha Startup wuxuu maraa labo marxaladood.
Marka hore waa in aad ka heshaa Business Finlandbayaan ogolaansho ah. Business Finland ayaa qiimeynaysa tusaalaha ganacsiga ee shirkaddaada, aqoonta iyo awoodda aad ku kordhin karto ganacsigaada. Ma heli kartid sharciga degenaanshaha Startup haddii aadan Business Finland ka haysan bayaan ogolaansho ah.
Kaddib marka aad ka hesho Business Finland bayaan oggolaansho ah, waxaad Hay’adda socdaalka ka codsan kartaa sharciga degenaanshaha Start-up. Bayaanka Business Finlandwuxuu shaqeynayaa labo bilood.
Bogagga Hay’adda socdaalka iyo Business Finland waxaad ka heleysaa tilmaamo iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan codsashada sharciga degenaanshaha start-up.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaStartingupsmoothly.fi
Chatka loogu talagalay shirkadlayaaha ajaaniibta ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Sharciga degenaanshaha Startup Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Ka codso sharciga degenaanshaha ganacsadaha ama sharciga degenaanshaha start-up shabakadda Enter Finland -adeeggeeda. Marka aad codsiga sameyso waa in aad tagtaa safaaradda Finland ee kuugu dhow si aad u caddeyso aqoonsigaada islamarkaasna aad u soo bandhigto asalka lifaaqyada codsiga Waa in aad safaaradda tagtaa saddex bilood gudohood laga soo billaabo marka aad codsiga ka sameysay shabakadda Codsiga waxaa laga baaraandegayaa marka aad saafaradda tagto kaddib Safaaradda waa in ballan horay looga qabsadaa.
Xusuusnow in aad codsigaada lifaaqdo dhammaan lifaaqyada loo baahanahay islamarka aad codsiga xaraynayso. Tani waxay dedejinaysaa ka baaraandegista codsigaada.
Akoonkaada Enter Finland si joogto ah u hubi. Haddii codsigaada looga baahdo caddeymo dheeraad ah waxaa laguugu soo sheegayaa akoonkaada.
Ka baaraandegista ruqsaddu waa lacag. Waa in aad lacagta bixisaa marka aad xareyneyso codsiga ruqsadda. Lacagta codsiga waxaad ku bixin kartaa Enter Finland adeeggeeda.
Haddii aadan codsiga ka samayn karin shabakadda, waxaad buuxin kartaa foomka codsiga ee warqadda ah. Keen foomka codsiga ee aad buuxisay iyo dhammaan lifaaqyada loo baahanyahay safaaradda Finland ee kuugu dhow. Bogagga shabakadda ee Hay’adda socdaalka ayaad ka daabacan kartaa foomka codsiga. Safaaradda waa in ballan horay looga qabsadaa.
Marka aad Finland u soo guurto, waa in aad tagtaa goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadkasi aad degane ahaan isaga diiwaangeliso Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinland Isu diiwaangelin degene .
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaNewCo Helsinki
Hagaha aasaasida shirkadaha cusubLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa